WARSAXAAFADEED: MADAXTOOYADDA SOMALILAND | Toggaherer's Weblog
Golaha wasiirada xukumada somaliland oo gudoominaayay Madaxweynaha JSL Mudane Daahir Rayaale Kaahin, waxaa maanta oo khamiis ah fadhi aan caadi ahayn ay ku yeesheen xarunta Madaxtooyada JSL.
Golaha wasiiradu waxaa maanta fadhigaasi uu kaga doodey xeer loogu talo Galey ka hortaga argagixisada .
Golahu waxaa uu si qoto dheer u qaada dhigey xeerka argagixisada, oo ah mid Loogu talo galey in maxkamad sharci ah lagu soo taago dadka ku kaca falalkaasi, oo Noqdey qaar ka dhacay dunida meelo badan oo ka mid ah
tobankii sanadood ee ugu danbeeyey, sida aynu ka warhayno falalaas argagixiso, waxaa ka mid ahaa kuwii ka dhacay JSL 29/10/08.
Golaha wasiiradu markii uu si qoto dheer uga baarandegay xeerka lagu talo galey Ka hortaga Argixisada qodobada uu ka kooban yahay ,waxay si wado jir ah u Ansixiyey Xeerkaasi. Waxaana Xeerkan loo gudbin doonaa goloyaasha sharci Dejinta somaliland sida ugu dhakhsaha badan .